Kpido: sms ncheta ncheta | Martech Zone
Kpido: sms ncheta ncheta
Trumpia: ahia niile na-ahia
Trumpia na-enye ụlọ ahịa ịzụ ahịa niile nke gụnyere ozi ederede ederede, ozi ịre ahịa mgbasa ozi email, mgbasa ozi olu na ozi ngwa ngwa. Na mgbakwunye, sistemụ ahụ nwere nzacha ọgụgụ isi, ichebara echiche siri ike, njikwa mkpọsa, Kupọns na onye nrụpụta siri ike API. Enwere ike ịchagharị ya! Ulo elu nke Trumpia bu uzo di iche-iche ohuru eji agbako, ozi, itinye aka ma kwalite onyinye gi site na ekwenti, email na mgbasa ozi. Ha na-enye atụmatụ ole na ole n'ime usoro ọ bụla: Na-anakọta